Khel Paper | जीतबहादुरले जीते कि हारे?
साताको खेलाडी / जीतबहादुरले जीते कि हारे?
नेपालका लागी पहिलो अन्तराष्ट्रिय पदक दिलाउने ब्यक्तिको नाम नै जीत बहादुर । तर वास्तविक जीवनमा र नेपालको खेल क्षेत्रमा के जीत बहादुरको नामको अर्थ पुष्टि भएको होल त? यो प्रश्नको जवाफ नेपाली खेल अधिकारीसँग सायदै होला । दशरथ रंगशालाको वरिपरि विहान देखी बेलुका सम्म भेटिने एउटा सामान्य ब्यक्ति जसलाई राज्यले नचिनेका कारण नेपालका धेरै खेल प्रेमीले पनि अझै चिन्न सकेका छैनन् ।
उहाँ सेनामा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँको आन्तरिक प्रतियोगितामा दौडदा दौडदै राष्ट्रिय खेलाडी बन्नुभयो । सेनाभित्रको एकजना सामान्य खेलाडीले देशकै प्रतिष्ठासंग गाँसिएको अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान राख्ला भन्ने कसैलाई अनुमानसम्म थिएन् । तर भयो त्यस्तै, उहाँ म्याराथन दौड पुरा गर्ने पहिलो नेपाली धावक मात्र बन्नु भएन नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो पटक दिलाएर आफैमा एउटा सिंङ्गो इतिहास बन्नुभयो उहाँ अर्थात जीतबहादुर केसी । भूतपूर्व भएर पनि खेलाडीहरुसंग हातेमालो गर्ने अहिले उहाँको दिनचर्या बनेको छ ।
२००५ साल भदौ ४ गते दोलखाको पवटी गाविस वडा नम्वर ४ मा उहाँ जन्मदा त्यहाँ कुनै हर्ष बढाई भएको थिएन् । तर विर्खबहादुर केसीको परिवारमा जन्मिएको कान्छो करिव २५ बर्षपछि एकाएक चर्चामा आयो । रेडियोमा उस्को नाम सुन्दा पवटीवासीहरु खुशीले उफ्रिए । त्यही कान्छो २०२१ सालमा गाउँवाट अचानक गायब भएको थियो । कान्छो अर्थात जीतबहादुर काठमाण्डौं आउँदा सेनामा भर्ति खुलेको रहेछ । उहाँ सेनामा भर्ति हुनुभयो । तालिमको बेला दौडदा दौडदै उहाँले आफुलाई कुशल धावक सावित गर्नुभयो । त्यसपछि सेनाभित्रकै खेलाडी बनाएर उहाँलाई राष्ट्रिय टीममा पठाईयो । २०२८ सालमा वीरगंजमा आयोजित म्याराथन प्रतियोगितामा केसीको खेल जीवनको आधारस्तम्भ बन्यो । उहाँले वीरगंजको उखरमाउलो गर्मीमा २ घण्टा ३८ मिनेटमा म्याराथन दौड पुरा गर्नु भयो । यसअघि कुनै नेपालीले यो दौड पुरा गर्न सकेको थिएन् । पछि वीरगंजमा पाएको त्यो सफलता आफैमा कीर्तिमान बनेको थियो ।
जीतवहादुर रहरले भन्दापनि बाध्यताले खेल क्षेत्रमा होमिनु भएको थियो । त्यतिबेला सेना भित्रै गण– गणमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । हरेक प्रतियोगितामा उहाँ पहिलो रोजाईमा पर्नुहुन्थ्यो । जागीरका लागि भएपनि खेल्नैपर्ने दौड्नै पर्ने बाध्यता थियो । दिनमा कम्तिमा ६०–७० किलोमिटर दौडनु पथ्र्यो । विस्तारै उहाँको नाम एथलेटिक्स क्षेत्रको अभिन्न अंग बन्यो । उहाँले त्यसलाई छोड्नै सक्नु भएन् । त्यतिबेला म्याराथन दौडने २, ३ जना मात्र थिए । सन १९७० मा बैङ्ककमा आयोजित एसियन खेलकुद प्रंतियोगितामा नेपालले पनि म्याराथनमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । जीतवहादुर केसी र गंगावहादुर थापालाई त्यहाँ जाने अवसर जु¥यो । विदेश यात्राको पहिलो अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पहिलो अनुभव, नेपालले म्याराथनमा भाग लिएको पहिलो अनुभव हुँदाहुँदै पनि केसीले एसियाडमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु भएको थियो । उहाँले उक्त म्याराथन दौड २ घण्टा ३५ मिनेटमा पुरा गर्नु भएको थियो । उहाँ त्यो बेला एसियाभरिका प्रतिस्पर्धिहरुविच सातौं हुनु भएको थियो ।
सन १९७२ को म्युनिख ओलम्पिकमा भाग लिन उहाँ जर्मनी जानुभयो । जर्मनीकै कोलनमीमा भएको छनोट चरणमा २ घण्टा २३ मिनेटमा म्याराथन दौड पुरा गर्दा उहाँ मात्र होइन, नेपाली टीमका सम्पूर्ण सहभागिहरु निकै उत्साहित भएका थिए । तर फाइनलका दिन एउटा अस्वभाविक घटना घट्यो । २१ किलो मिटर दुरी पार गरिसकेको अवस्थामा उहाँको खुट्टाको मसल फर्कियो र वीचैमा दौड टुङ्याउनु प¥यो । उहाँले जान पुगेर दौड छोड्नु प¥यो त्यहाँभन्दा अगाडि दुई तीन जना मात्रै थिए । अन्य सवैै प्रतिस्पर्धिहरुलाई उहाँले पछि पारिसक्नु भएको थियो । सन १९७३ मा फिलिपिन्समा आयोजित एसियन ट्रयाक एण्ड फिल्ड प्रतियोगितामा केसीले व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै नभै नेपालको लागि एउटा उत्साहजनक प्रतियोगिता सावित भयो । त्यहाँ आयोजित म्याराथन प्रतियोगितामा उहाँले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो । त्यतिखेर उक्त म्याराथन दौड पुरा गर्न २ घण्टा २७ मिनेट लागेको थियो उहाँलाई । नेपालले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेको यो नै पहिलो घटना थियो । विजयपछि खेल मैदानमा नेपालको झण्डा फहराइयो, केसीले पनि यो सफलतासंगै थुप्रै स्याबासी पाउनु भएको थियो । स्वेदेश फर्कदा केसीलाई एयरपोर्टदेखि नै सिन्दुरयात्रा गरेर शहर घुमाइएको थियो ।
पहिले गंगाबहादुर थापा उहाँको सहकर्मी थिए, पछि बैकुण्ठ मानन्धर आए । मनिला र कोरियामा केसी तेस्रो हुँदा बैकुण्ठ चौथो भएका थिए । आफ्नै सहयात्री बैकुण्ठले बैकुण्ठले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोसिगतामा लगातार पहिलो भएर नयाँ कीर्तिमान बनाउँदा केसीलाई निकै खुशी लागेको थियो । आफ्नो संघर्षपूर्ण खेलजीवनको संझना गर्दै केसीले भन्नुभयो –‘त्यतिबेला लक्ष्मण शाह र मधुशम्शेर राणा कोच थिए । एक गिलास दुध खान पनि समस्या थियो, बजेट नै थिएन । वाहिर जाँदा ५ रुपैयाँको डाइड खुवाउथे , एउटा जुत्ता किन्नको लागि पनि समस्या हुन्थ्यो । सेनातर्फ ७० रुपैयाँको तलब थियो । मरिमरि छाक कटाइ कटाइ चाइनिज सेतो जुत्ता किन्यो, त्यो पनि धेरै दिन टिक्दैनथ्यो । कहिले काहिँ फाटेको जुत्ता लगाएर पनि दौडनु पथ्र्यो । तर अहिले त्यो स्थितिमा निकै सुधार आईसकेको छ । तर खेलकुद परिषदका मान्छेहरुसंग डाइटको विषयलाई लिएर अहिले पनि कचकच परिरहेको छ । तै पनि खेलाडीहरुले चित्त बुझाएर खेलिरहेको छन् ।’
जीतबहादुर केसीले खेलकुद क्षेत्रमै सिमित हुन २०३७ सालमा सेनाको जागिर छोडनु भएको थियो । त्यतिखेरको ‘जम्दार जीतवहादुर’ राखेपमा प्रबेश गरेपछि कहिले सहायक प्रशिक्षक बन्नुभयो त कहिले सडकछाप भूतपूर्व खेलाडी । परिषदका पदाधिकारीहरुले उहाँलाई जहिले पनि भकुन्डो जस्तै खेलाई रहे । २०४९ सालमा त्यहाँका निर्दयीहरुले मेरो जागिर खाई दिए – केसीले भन्नुहुन्छ । तर केहि समयपश्चात फेरि उहाँलाई करारमा भर्ति गरियो, पछि स्थायी पनि बनाइयो । बाघदरबारको एउटा खोपीवाट शुरु भएको खेलकुद यति लामो समय वित्दा धेरै समुन्नत होला भन्ने आशा थियो, तर खै के हो, के हो ? तै पनि केहि व्यक्तिहरुले खेलकुदमा गरेको योगदान मान्नैपर्छ । कुमार खड्गविक्रमले जग बसाउने काम गरे, शरदचन्द्रले सशक्त बनाए । यो कुरा नपत्याउने मान्छेले खेलकुद बुझेकै छैन् केसीले भन्नुभयो ।
जीतबहादुरले पटकपटक निरासा र असन्तुष्टिका कुरा गर्नुभयो । आफ्नो प्रतिभाको यथोचित कदर नभएको पीडा सवैलाई हुन्छ– सायद यस्तै कुराले उहाँपनि पीडित हुनुहुन्थ्यो । एउटा प्रसंग यहाँ कोट्याऔं – सन १९७३ मा फिलिपिन्समा पहिलो पल्ट अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउँदा उहाँलाई गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो दिने निर्णय भएको थियो । तर पछि गोदवा पाँचौं घोषणा भयो । उहाँ त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सिलसिलामा विराटनगरमा हुनुहुन्थ्यो । शुरुमा एउटा आश्वासन दिने पछि अर्को निर्णय गर्ने परिपाटीसंग उहाँले असन्तोष व्यक्त गर्दै त्यो विभूषण अस्वीकार गर्नु भएको थियो । त्यतिखेर अधिराजकुमार बसुन्धरा, सुशिलशम्सेर, खड्गजीत बराल आदिले घर दिने, दिनको दस रुपैयाँ भक्ता दिने, मधेसमा जग्गा दिने आश्वासन दिएका थिए । त्यसै अुनसारको लेखापढी पनि भएको थियो तर पछि कसले के गरे पत्तै भएन् । यस्ता घटनाहरु धेरै भोगेका छन जीतवहादुरले । उहाँलाई २५ बर्षपछि तत्कालिन नेपाल खेलकुद मन्चका अध्यक्ष श्रीविक्रम भण्डारीले सम्मान गरेका थिए । यो भन्दा अघि उनलाई कसैले सम्मान गरेको थिएन् ।
लामो समय खेलकुदमा विताएका जीतवहादुरले जीवनमा कहिल्यै भुल्न नसक्ने एउटा अविष्मरणीय घटना सुनाए । जुन सन १९७३ मा सम्पन्न म्युनिख ओलम्पिकमा घटेको थियो । ओलम्पिक स्पोर्टस भिलेजको एउटा फ्ल्याटमा नेपाली टोली बसेको थियो । अर्को फल्याडमा इजराली खेलाडीहरु वसेका थिए । मध्यरातमा नजिककैको फ्ल्याटमा गोली चल्योको आवाज आयो । कुमार खड्ग विक्रम शाह, अधिराजकुमारी शारदा र शोभालगायत नेपाली टोलीका सवैलाई त्यो आवाजले स्तब्ध पा¥यो । भोलिपल्ट उज्यालो हुनासाथ बाहिर निस्कदाच पल्लो कोठामा रगतको खोला देखियो । २, ४ जना रगतपिच्छे भएर लडिरहेका थिए । अरु ९ जनालाई पाता फर्काएर एकै ठाउँमा बाँधिएको थियो र वरिपरि ४ जना अरवी घुमिरहेका थिए । एकजनाको हातमा ग्रिनेट थियो भने अरुले मेसिन गन बोकेका थिए । आफ्नै कोठा बाहिर त्यस्तो भयङ्क दृष्य देख्दा जितवहादुर सन्त्रासले छपक्कै छोपेको थियो । पछि मात्रै थाहा भयो केहि अरवी आतंककारीहरुले इजराली खेलाडीलाई बन्दी बनाएर इजरायलमा बन्दी बनाएका आफ्ना साथीहरुलाई छुडाउन यो आक्रमण गरेका रहेछन् । पछि सेनाले कारवाहि ग¥यो, गोली हानहान भयो, हेलिकोप्टर जल्या, देख्दादेख्दै केहि मान्छेको लाश भए । यो घटनापछि ३, ४ दिन नेपाली टोलीका सदस्यहरु सुत्न सकेनन् । ओलम्पिक खेल ३ दिन स्थगित भयो । कुनैपनि देशका खेलाडीले राम्रो संग खेल्न सकेनन् ।